IOS9मा कस्टम रिंगटोन कसरी थप्ने आईफोन समाचार
आईओएस9मा कस्टम रिंगटोन कसरी थप्ने
केहि चीज जुन धेरै स्मार्टफोन मालिकलाई अनुकूलन टोनहरू राख्न सक्षम भइरहेको छ। एक प्रश्न जुन तपाईं प्राय: हामीलाई सोध्नुहुन्छ कसरी आईओएस custom मा कस्टम रिंगटोन थप्न। द्रुत र थोरै हास्यास्पद उत्तर "आईओएस in मा जस्तै" हुनेछ, तर यो उत्तर हामी तपाईंलाई दिन चाहानुहुदैन, त्यसैले हामी तपाईंलाई चार फरक-फरक विधिहरू सिकाउँदछौं ताकि तपाईं आफूलाई सबैभन्दा मनपर्ने कुरा सेट गर्न सक्नुहुनेछ। रिंगटोन यद्यपि मैले याद गरे कि त्यस्ता धेरै टोनहरू तपाईंले सोचे जस्तो राम्रो हुनेछैनन्, तर यो यो पनि साँचो हो कि त्यहाँ अरुहरू पनि छन् जो यसको लायक छन्। यस गाईडमा हामी चार प्रस्ताव गर्नेछौं तपाईंको आईफोनको लागि र r्गटोनहरू सिर्जना गर्न विभिन्न तरिकाहरू.
1 आईओएस9मा कस्टम रिंगटोन कसरी थप्ने
1.1 आईट्यून्सको साथ
1.2 ग्यारेजब्यान्डको साथ
1.3 अडिको संग
1.4 App Store बाट प्रोग्रामहरु को साथ
2 व्हाट्सएप वा फेसबुकको रिंगटोन कसरी परिवर्तन गर्ने
म यो विधिबाट सुरू गर्दछु किनकि यो मलाई सब भन्दा साधारण लाग्छ र यो हामी सबैको लागि मान्य छ जुन आईट्यून्स स्थापना गर्न सक्दछ, जुन ओएस एक्स र विन्डोज प्रयोगकर्ताहरू हुन्।
हामी एउटा गीत छान्छौं आईट्यून्सबाट
हामी सेमीडी + io गर्छौं गीतमा र त्यसपछि क्लिक गर्नुहोस् जानकारी पाउनुहोस्.
ट्याबमा जानुहोस् विकल्पहरू.
हामी सुरू र अन्त पोइन्ट सूचित गर्दछौं। अधिकतम s०s राख्नुहोस्, यद्यपि म केहि कम राख्छु।
हामी मा खेले स्वीकार.
हामी फेरि सेन्टिमी + io दायाँ क्लिक गर्छौं, तर यस पटक हामी छनौट गर्दछौं AAC संस्करण सिर्जना गर्नुहोस्। हामी हेर्नेछौं कि हामी कसरी गीतको नक्कल गर्छौं, तर नयाँमा हामीले चरण step मा कन्फिगर गरेको समय आउँनेछ।
हामी नयाँ तान्छौं डेस्कटपमा गीत.
Le हामी m4a बाट m4r मा विस्तार परिवर्तन गर्दछौं.
हामी गर्छौं नयाँ फाईलमा डबल क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई सिधा आईट्यून्सको टोन सेक्सनमा राख्नेछ।
अन्तमा, तार्किक, हामी हाम्रो आईफोनको साथ समक्रमण गर्नेछौं.
मुख्य समस्या जुन मैले यो प्रणालीको साथ देख्दछु त्यो यो हो कि यो फेड ईन वा बाहिर थप्न सम्भव छैन, केही कुराले केही अवसरहरूमा टोनलाई राम्रो हुन अनुमति दिन्छ।
यो अहिले सम्म मेरो मनपर्दो विधि हो। म लामो समयदेखि यस प्रकारको प्रोग्रामसँग "खेल्दै छु" र मेरो लागि यो सब भन्दा साधारण हो। साथै, ग्यारेजब्यान्ड सम्पूर्ण अडियो रेकर्डिंग र सम्पादन कार्यक्रम हो, हामी चाहिएको प्रभाव थप्न सक्छौं, यद्यपि सबै भन्दा राम्रो कुरा यो हो कि हामी केवल यसमा फेड-इनहरू र फेड-आउटहरू थप्छौं।
मैले प्राय: प्रयोग गर्ने लामो प्रक्रियाको व्याख्या गर्नु अघि, म तपाईंलाई यो कुरा बताउन चाहान्छु कि त्यहाँ दोस्रो मार्ग छ (जुन धेरैलाई पहिलो हुन्छ) ग्यारेजब्यान्डको साथ टोन सिर्जना गर्न र यो धेरै सरल छ, तर मलाई यो मनपर्दैन। हो खाली परियोजना छनौट गर्नुको सट्टा हामी टोन चरण २ मा छान्छौं, हामी यसलाई धेरै छिटो सिर्जना गर्न सक्दछौं। हामीले केवल सबै चीजको सुरूवातमा तरंग (चरण)) तान्नु पर्नेछ, सेयरमा दिनुहोस् र "गीतलाई आईट्यून्स ..." चयन गर्नुहोस्। ग्यारेजब्यान्डले automatically० सेकेन्ड मुनि गीत स्वचालित रूपमा ट्रिम गर्दछ।
के म सामान्यतया निम्न गर्दछ:
हामी खोल्छौं गेराजब्यान्ड.
हामी नयाँ सिर्जना गर्दछौं खाली परियोजना.
हामी माइक्रोफोन वा अनलाइन इनपुट मार्फत रेकर्ड छनौट गर्दछौं।
हामी क्लिक गर्दछौं सिर्जना गर्नुहोस्.
हामी अडियोलाई विन्डो भित्र तान्दछौं ग्यारेजब्यान्ड र हामी तरंगलाई सबै कुराको सुरूमा सार्छौं.
हामी अडियो सम्पादन गर्दछौं। यो गर्नका लागि, हामी तल दुई पटक तलको सम्पादक हेर्नका लागि वेभमा क्लिक गर्दछौं।
यदि हामी के चाहान्छौं भने हामी नचाहेको कुरा मेट्न चाहन्छौं, तल च्यानलमा, हामी कर्सरलाई सार्नको लागि क्लिक गर्दा एउटा टुक्रा मेट्नका लागि (हामी यसलाई सेमीडी + X मार्फत मेटाउँछौं)। म के गर्छु एउटा सानो टुक्रा हटाउनु हो जुन अन्तमा पछि मेरो टोनको लागि चाहन्छु। एक पटक मैले छालको त्यो टुक्रा हटाइसकेपछि, माथिल्लो विन्डोमा मैले पहिलेनै मेटाउने बटनबाट बाँकीलाई मेटाउन सक्छु।
त्यसो भए हामी गर्न सक्दछौं फेड-इन र फेड-आउट सिर्जना गर्नुहोस्। यो गर्न हामी छविलाई तपाईले हेर्ने ठाउँमा छुनेछौं, जसले हामीलाई भोल्युम लाइन हेर्न अनुमति दिनेछ। त्यसो भए म दुई बुँदाहरू बनाउने सल्लाह दिन्छु: एउटा जहाँ हामी फेड सुरु गर्न चाहन्छौं र अर्को अन्तमा, जसरी तपाईं छविमा देख्न सक्नुहुन्छ।
पुराको अन्त्यमा गीतको अन्त्यको मार्कर धेरै लुकेको छ। पर्छ हामीले सम्पादन गरेको कुराको अन्त्यमा त्यो विद्रोही त्रिकोण ड्र्याग गर्नुहोस्.
अर्को कुरा साझेदारीमा जानुहोस् र "रिingटोनमा आईट्यून्स ..." चयन गर्नुहोस्। ITunes स्वचालित रूपमा खुल्नेछ र टोन खेल्न सुरू हुनेछ।
अब हामी मात्र यसलाई पुन: नामकरण गर्नुपर्नेछ (यदि हामी चाहन्छौं भने) आइट्यून्स र मा हाम्रो आईफोनको साथ टोन सि sy्क्रोनाइज गर्नुहोस्.
जसरी यसले भन्छ felipe टिप्पणीहरूमा, अनुकूलन टोनहरू सिर्जना गर्न एक वेबसाइट पनि छ। म कल्पना गर्छु कि त्यहाँ अझ धेरै चीजहरू छन्, तर मैले प्रयास गरेको छु र प्रयोग गर्न यो सरल र छिटो देखिन्छ। को वेब अडिको हो र अनुप्रयोग स्टोरमा अनुप्रयोग पनि हुन्छ, तर तपाईंले आइट्यून्सको साथ टोन साझा गर्नुपर्नेछ र त्यसपछि आईफोनमा फर्काउनुहोस्। यदि तपाईले कम्प्युटर प्रयोग गर्नुपर्‍यो भने, वेबबाट सिधा यो गर्नु राम्रो हुन्छ। अडिको वेबको साथ टोन सिर्जना गर्न तपाईंले निम्न कार्यहरू गर्नुपर्दछ:
पृष्ठमा जानुहोस् http://es.audiko.net
हामी क्लिक गर्दछौं लोड गर्नुहोस्.
हामी गीत छनौट गर्दछौं जसबाट हामी टोन निकाल्न चाहन्छौं।
जब म लोड गर्न सकें, हामी चाहेको अंश छनौट गर्नको लागि हामी तल्लो कुनाबाट सर्छौंयाद गर्दै, तिनीहरू 40० सेकेन्ड भन्दा कम हुनुपर्दछ।
हामी सूचित गर्दछौं, यदि हामी चाहन्छौं भने, फेड इन र आउट.
हामी "मा क्लिक गर्दछौंरिंगटोन सिर्जना गर्नुहोस्"(त्यो मैले पढेको हो, मलाई थाहा छैन यो मेरो वा वेबबाट गल्ती हो भने)।
त्यसपछि हामी चयन आईफोन.
हामी डी मा क्लिक गर्दछौंलोड.
अन्तमा, सधैं जस्तो, हामी आईफोनको साथ टोन सिnch्क्रोनाइज गर्दछौं ITunes मार्फत।
App Store बाट प्रोग्रामहरु को साथ
यो त्यस्तो चीज हो जुन मैले व्यक्तिगत रूपमा मैले कहिले गरेको थिइनँ वा मलाई लाग्दैन कि म कहिले ग्यारेजब्यान्ड प्रणालीको साथ गर्दछु, तर म विकल्पको रूपमा टिप्पणी गर्दछु। हामीले भर्खर अनुप्रयोग स्टोरमा "रिंगटोन", "रिंगटोन निर्माता", "टोन सिर्जना गर्नुहोस्" र यस्तै चीजहरूको खोजी गर्नुपर्नेछ र तपाईले यसको लागि धेरै अनुप्रयोगहरू देख्नुहुनेछ। त्यहाँ धेरै नि: शुल्क छन्, प्राय जसो सबै, तर सीमितता र केहि प्रकार्यहरूसँग, तिनीहरू सबै प्रायः। मैले भनें, म यो विकल्पको रूपमा उल्लेख गर्दछु, तर अधिक आईफोनहरू प्रयोग गर्ने छौं यदि हामीसँग आईफोन छ, त्यसैले मलाई लाग्दैन कि यो तपाईंको रुचाइएको विकल्प हो। म तपाइँलाई दुई भन्दा बढी प्रयोग भएको छोड्दछु।
यहाँ मैले आफैंका लागि बनाएको टोनहरूको सूची छ र केहि अनुरोध गरिएको छ:
म एक अल्बात्राज हुँ
ड्र्यागन बल मेटल
ड्र्यागन बल जेड धातु
एलेक्स किड परिचय
एलेक्स किड खाने
व्हाट्सएप वा फेसबुकको रिंगटोन कसरी परिवर्तन गर्ने
सी को लागीWharsapp को टोन परिवर्तन गर्नुहोस्, तपाईं व्हाट्सएप को सेटिंग्स मा जानु पर्छ, सूचना नयाँ सन्देश वा समूह सन्देश, त्यहाँ तपाईं टोन परिवर्तन।
एक फेसबुक यो आईओएस सेटिंग्स भित्र परिवर्तन गर्न सकिन्छ, त्यहाँ तपाईंसँग विभिन्न अनुप्रयोगहरूका सूचनाहरूको टोन परिमार्जन गर्न विकल्प हुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » ट्यूटोरियल र म्यानुअल » आईओएस9मा कस्टम रिंगटोन कसरी थप्ने
फर्नांडो (@ गर्जा_रिल) भन्यो
उत्कृष्ट ट्यूटोरियल, चरण-देखि चरण धेरै राम्रोसँग वर्णन गरिएको छ। म ग्यारेजको साथ प्रयास गर्ने छु, किनकि अहिले सम्म मैले आइट्यून्समार्फत गरेको छैन किनकि तपाईं पहिलो तरिकामा व्याख्या गर्नुहुन्छ।
जे भए पनि मँ अझै पनी दुखी छु कि एप्पलले "स्वदेशी" लाई अनुमति दिदैन।
पाब्लो, मलाई लाग्छ कि तपाईं सब भन्दा राम्रो लेखक हो र धेरै उद्देश्यका साथ, यसलाई जारी राख्नुहोस्।
फर्नान्डोलाई जवाफ दिनुहोस् (@Garza_Real)
धेरै राम्रा ट्यूटोरियलहरू अहिले सम्म म तपाईंको वेबसाईटमा अडियो प्रयोग गर्छु, म यसलाई पीसीमा डाउनलोड गर्छु र यसलाई आईट्युन्सको साथ समक्रमण गर्दछु। सादर
नमस्कार फिलिप। यो अर्को राम्रो विकल्प जस्तो देखिन्छ। तपाइँको अनुमति संग, म यो जोडें 😉
कृपया पाब्लो, सबै उपयोगी छ साझा गर्नु पर्छ। सादर
यदि तपाईं जेलब्रेक प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ भने तपाईंसँग यो धेरै सजिलो हुन्छ ... अनलिमिटन्सहरूको साथ।
तपाईं यसलाई जेलब्रोकन आईफोनमा अनलिमिटन्सको साथ डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र यि इटल्स जस्ता प्रोग्रामहरूसँग पीसीमा तिनीहरूलाई हस्तान्तरण गर्न सक्नुहुनेछ, र त्यसपछि तपाईं तिनीहरूलाई आईट्यून्ससँग सिंक गर्न सक्नुहुनेछ र ती टोनहरू कुनै पनि गैर-जेलब्रोकन आईफोनका लागि मान्य छन् ...
बुआआ अक्सर टोस्टन गर्थे र त्यसले मलाई वर्णन गरेन जस्तो म चाहान्छु।
जेरार्डो सान्चेज भन्यो
के पहिलो चरण अझै काम गर्दछ? म मेरो म्याकमा यो गर्छु र डबल क्लिक गर्दछु र m4r फाईल संगीतमा प्ले गर्दछ
कसैले मलाई यो किन हुन्छ भनेर बुझाउन सक्छ?
Gerardo Sanchez लाई जवाफ दिनुहोस्
एक कमबख्त रिंगटोन को लागी धेरै
गलत जानकारी त्यहाँ विकल्प विकल्प AAC संस्करण सिर्जना छैन
मैले भर्खर आईफोन एसई खरिद गरें र ती चरणहरूमार्फत यो सम्भव छैन। विकल्पहरू जुन प्रदर्शित विन्डोजहरूमा देखा पर्दछ ती ती होइनन् ...
र टोनहरूको सूची खाली रहेकोमा, मसँग सि I्ख्रोनाइज गर्ने विकल्प छैन र नत्र मैले रिंगटोनलाई काटेर पेस्ट गर्न सक्दछु र विस्तारलाई rm4 मा बदल्नको लागि म व्यवस्थापन गर्दछु।
सजिलो कुरा ट्विस्टवेभ कार्यक्रमको साथ हो, यसले mp4 भिडियोहरू अडियोको रूपमा पनि खोल्न सक्छ र यसलाई विभिन्न प्रकारका अडियो ढाँचामा रूपान्तरण गर्न सक्छ,
यदि यसले काम गर्दछ तर संस्करण एसी बनाउने दायाँ बटनको साथ छैन भने, तपाईंले गीत चयन गर्नुपर्नेछ र त्यसपछि फाईल (शीर्ष बायाँ) मा क्लिक गर्नुपर्नेछ र ड्रप-डाउन चयन रूपान्तरण गर्नुहोस् र त्यसपछि एएसी। नयाँ अवधि र उही गीतको नामको साथ फाइल सिर्जना गर्नुहोस्, यसलाई डेस्कटपमा तान्नुहोस्, एक्सटेन्सन पुन: नामाकरण गर्नुहोस् (F2) (यसले तपाईंलाई तपाईं एक्सटेन्सन परिवर्तन गर्न चाहानुहुन्छ भनेर यकिन गर्न सोध्दछ, स्वीकार प्रेस गर्नुहोस्) र यो हो। आईफोन जडान गर्नुहोस् र टोन सिnch्क्रोनाइज गर्नुहोस् (फोल्डर छनौट गर्नुहोस् जहाँ फाईल अवस्थित छ। फेब्रुअरी २०१।
तुलना, वनप्लस २ बनाम आईफोन 2